Mbola manalasala sy mahalasalasa saina… | NewsMada
Mbola manalasala sy mahalasalasa saina…
Aza mbola misioka, hono, raha tsy tafavoaka ny ala. Tsy inona fa ny toe-draharaham-pirenena, sarotra sy manahirana. Ho tafavoaka amin’ny krizy amin’ity hoe marimaritra iraisana ihany ve? Marimaritra ratsy izao. Eo, ohatra, ny fanamafisan’ny eny amin’ny kianjan’ny 13 mey ny fitakiana ny fialan’ny filohan’ny Repoblika.
Tsy vitan’izany, mandeha ny hetsika sy fanoherana avy hatrany etsy sy eroa amin’ireo minisitra naverina na nafindra toerana amin’ireo hoe HVM. Ho very ny minisitera amin’izany? Na ho voa ny mpiasa… Fijerena na fandikana ny HVM avokoa izany. Hilamina na hahitam-bahaolana amin’izany ve, ohatra, ny fitakiana sendikaly?
Fahadisoana politika ny raharaha? Na tsy fananana olona hatramin’izay… Tsy inona fa noho ny tsy fiomanana hitondra fanjakana sy firenena hatrany am-boalohany. Kitsapatsapa lava amin’izay atao rehetra na amboletra? Raha tsy izany, fihantsiana fotsiny izao ny olona efa aloam-bahoaka: atao ihany ny atao, na inona tsy mety na diso.
Ho an’ny vahoaka, na eo aza ny fandaminana politika amin’izao toe-draharaha izao: zava-dehibe sy maika ary mila vahaolana ny amin’ny fidangan’ny vidim-piainana, tsy fandriampahalemana, fandrobana tany… Tsara ary ilaina ny firosoana any amin’ny fanatanterahana ny fifidianana mialoha ny fotoana no tanjona.
Na eo aza izany rehetra izany, mandra-pitrangan’izay hitranga, efa nisy ny dingana amin’ny fanovana… governemanta: ahoana amin’izay ny amin’ny fiainam-bahoaka mivantana? Farafaharatsiny, mba hananan’ny vahoaka ifotony toky amin’ny ho avy sy hananany fahavitrihana ahay amin’ny fifidianana hatao ato ho ato.
Hanahirana, ohatra, ny hiatrehana ny fifidianana ao anatin’ny tsy fandriampahalemana, indrindra any ambanivohitra lavitra fanjakana, anjakan’ny dahalo, misy fanamparam-pahefana… Mba tena tsy hisy tokoa ny korontana mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana. Mbola manalasala sy mahalasalasa saina be ihany…